Home ASIAN FOOTBALL STORIES Denis Cheryshev Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada buuxda ee xiddiga reer Ruushka kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska; "Koobka Adduunka ee 2018". Dabeecadeena Caruurta ee Denis Cheryshev iyo Xogta Aan Bixin Karin Xogta waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska / asalka, asalka qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo OFF-Pitch (wax yar oo la yaqaan) oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay himiladiisa goolka koobka adduunka ee FIFA 2018 ee ku yaala waddankiisa. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal yar oo keliya ayaa og in Denis Cheryshev's Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Denis Cheryshev Sheeko Xeeldheer Xog -Nolosha Hore
Denis Dmitriyevich Cheryshev wuxuu ku dhashay magaalada 26th-December ee 1990 ee Nizhny Novgorod, Russia. Wuxuu u dhashay aabbihiis, Dmitri Cheryshev kaasoo ahaa ciyaaryahankii hore ee Ruushka, haatanna tababare.
Denis wuxuu ku koray walaalkiis Daani yar yar, laakiin wuxu ku qaatay qayb weyn oo caruurnimadiisii ​​ah aabihii uu jecel yahay, isaga oo ka duwan hooyadiis. Hoos waxaa ku yaal sawirka wiilka iyo aabaha.
Tan iyo markii ilmanimada hore, Denis wuxuu hubaa inuu mustaqbalkiisa noqon doono ciyaaryahan kubada cagta ah. Denis wuxuu raacay raadkii aabihiis oo uu kubada cagta ciyaaray. Aabaha Dmitri Cheryshev, ayaa dhinaca kale ka caawiyay aasaaska aasaasiga ah ee loo baahan yahay inuu arko wiilkiisa uu jecel yahay iyada oo riyadiisa aan ahayn khiyaali. Dmitri wuxuu ahaa ciyaaryahankii caanka ahaa ee FC Dynamo Moscow ka hor inta uusan si joogta ah ugu biirin Yurub. Joogitaanka Yurub wuxuu saameyn ku yeeshay asalka qoyskiisa.
Denis Cheryshev Sheeko Xeeldheer Xog -Ku noolaanshaha Isbaanish
Markii Denis uu shan jirsaday, aabihiis oo ahaa ciyaaryahan kubada cagta ah ayaa dalab ka helay kooxda Isbaanishka, Sporting de Gijón. Dmitri aqbalay dalabkan, wuxuu ka tagay Ruush waxaanan u guuray Spain isagoo qoyskiisa. Markii uu ku noolaa Spain, wuxuu arkay carqaladda luqadda inay tahay arin weyn oo caqabad ku ah xaaskiisa iyo wiilalkiisa, gaar ahaan Denis kaasoo ahaa inuu isku qoro akadeemiga kubada cagta. In la ogaado sida ay u saameyn karto, Denis waa inuu si dhakhso ah u bartaa luqadda Isbaanishka.
Little Denis waa inuu dhigto dugsi diyaargarow oo Isbaanish ah oo uu barto luuqada Isbaanishka oo uu macallinkiisa barto.
Inta lagu jiro bilaha ugu horeeya, wuxuu si dhib ah u fahmi karaa ereyga Isbaanish ah iyada oo aan loo baahnayn tarjumaan.
Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar, Denis yar ayaa u baratay dhaqanka Isbaanishka iyo barashada sida luuqadda Isbaanishka ah ee sida tooska ah ugu hadlo muwaadinkiisa.
Denis Cheryshev Sheeko Xeeldheer Xog -Xirfadaha Shaqada
Muddo ka dib markii dib loo riixay iyo tababarka luuqada Spanishka, Denis yar ayaa bilaabay inuu dhigto dugsi isboorti oo Sporting FC ah, taas oo aabbihiis uu xilligaasi ciyaarayay. Waxa uu ahaa 6 sano jir markii uu ku biiray akadeemiyadda Sporting Gijon, isaga oo joogaya ilaa uu ahaa 9.
Denis Cheryshev ayaa si dhaqsi ah u raacay aabihiis kooxdiisii ​​soo socota, Burgos, oo ku soo biirtay nidaamka dhalinyarada markay da'doodu tahay 9 sannadka 2000. Ka dib labo sanno oo uu u ciyaarayay kooxda Burgos, Real Madrid ayaa soo wacday. Denis Cheryshev ayaa ku biiray Real Madrid madaama uu leyliyay hibo fiican intii lagu jiray tijaabooyinkiisa. Hoos waxaa ku yaal Denis Cheryshev oo la yiraahdo maaliyadkiisii ​​ugu horeeyay ee Real Madrid.
Denis Cheryshev wuxuu qeyb ka ahaa Real Madrid sannadihii 14, isagoo ku biiray kooxda da 'yarta 12. Naadiga dhallinyarada, wuxuu arkay naftiisa si dhaqso ah uga soo koray da 'yaryar ilaa qof weyn.
2009, Denis Cheryshev ayaa garoonka ku soo galay kooxda B, waxaana uu udhaliyay goolal xNUMX xili ciyaaredka 22 ee hoos Zinedine Zidane. Kadibna, waxa la siiyay "Weeraryahanka ugu fiican ee kooxda Real Madrid. "Kadib, waxa uu ku biiray kooxda koowaad ee Real Madrid.
Sababta uu uga tagay Madrid: Denis Cheryshev ayaa hoosta ka xariiqay kaliya labo kulan oo uu u ciyaaray kooxda koowaad ee Real Madrid wuxuu bilaabay inuu kululeeyo keydka sababtoo ah tartan adag oo u dhexeeya ciyaartoyda waaweyn iyo kuwa yaryar. Hoos waxaa ka mid ah Denis Cheryshev iyo kooxda Real Madrid.
Ka dib markii uu si xamaasad leh u seexday bilooyin, Denis ayaa ka careysnaa kooxda. Marka laga hadlayo iibinta koowaad iyo horumarinta labaad, Real Madrid, nasiib darro, ayaa lumisay tartan Cheryshev ah. Codsiga Denis ee ka timid kooxda ayaa la beeniyay, isaga oo deyn ahaan u diidey.
Denis wuxuu u saftay seddex kulan oo uu u saftay Sevilla, Villarreal iyo Valencia. Ugu dambeyntiina wuxuu ku biiray Villarreal ka dib markii uu si joogta ah uga dhex muuqday 2016.
Koobka Adduunka ee Russia 2018Denis Cheryshev wuxuu caan ku noqday markii uu qarxay koobka adduunka ee 2018. Iyadoo aan wax badan la qorin, ayuu kor u qaadaa caankiisana waxaa lagu soo koobay sawirka hoose.
Inta kale, sida ay dhihi lahaayeen, hadda waa taariikh.
Denis Cheryshev Sheeko Xeeldheer Xog -Nolosha Xiriirka
Haa, laga yaabee inuusan noqon sida quruxda badan Fyodor Smolov sawirka kor ku xusan ee xaaskiisa hore, laakiin Denis Cheryshev ayaa hubaal ah in ay galaan qiimeynta 10 ciyaartoyda ugu riyaanka ah ee Ruushka la doonayo waxaana ku siineynaa sababtan. Abaalmarintan waxaa lagu guuleystay sababtoo ah qaab ciyaareedkiisii ​​ciyaareed ee Russia 2018 FIFA World Cup, laakiin wuxuu u sabab ahaa maskax ahaantiisa yurub. Runtu waa, gabdhaha, waxay u mahadcelinayaan dareenkiisa 'Denis' yurubiyanku sababtoo ah xaqiiqda ah inuu weli yahay bachelor xiligii qorista.
Isagoo ka hadlayay doorashadiisa, kaliya hal gabar wuxuu la kulmaa ciyaarta Denis. Ma ahan wax kale Cristina Cobo sawir hoose iyada oo ninkeeda. Cristina iyo Denis waxay ku jireen xiriirkooda tan iyo 2016.
Saaxiibada la yaabka leh ee Ruushka iyo Denis Cheryshev ayaa wax ka bartay Madre Ventura Sagrado Corazon Castellon iyo Jaamacadda Galbeedka Scotland ka hor inta aysan qorin Universitat de Valencia halkaas oo ay la kulantay ninkeeda. Maria iyo hooyadeed waxay udhashey gabadh qurux badan oo ku taala Span.
Marka la eego qoraalka, Cristina hadda waa qareen ka shaqeeya Arenal Sound ee Borriana, oo ah magaalo ku taal bariga Spain.
Denis wuu jecel yahay inuu si joogto ah u daabaco sawirrada saaxiibtiis, Cristina Cobo boggiisa Instagram. Si kastaba ha ahaatee, Denis ma uusan bixin wax faallo ah oo ku saabsan qorshihiisa mustaqbalka ee Cristina.
Denis Cheryshev Sheeko Xeeldheer Xog -Taariikhda Qoyska
Denis Cheryshev's family ma aha nooca caadiga ah ee Ruush ah ee badanaa nooca guryaha iyo kuwa aan jeclayn inay ka soo baxaan aagagga raaxada si ay u bilaabaan caqabado cusub dibada.
Denis Cheryshev ayaa iska leh qoysaskani oo runtii ku tiirsan yihiin aaminsan yihiin in ay ku kici karaan dalalka kale marka laga reebo Ruushka. Denis Cheryshev oo ka soo jeeda hooyadiis, aabe, walaal, walaashiis, adeer, asxaabta iyo qaraabada kale waxay dhammaantood barteen inay ka madaxbannaan nidaamka Ruushka.
Si ay u noqoto mid aamin ah, xitaa Denis 'aabihiis, Dmitri Cheryshev wuxuu ka fariistay xirfadiisii ​​xirfaddiisa isagoo aan shaki ku jirin inuu naftiisa u huray dhiirrigelinta wiilkiisa kubada cagta sida muuqata sawirka hoose.
Hadafku wuxuu ahaa inuu isaga ilaaliyo inuu gurigiisa joogo. Waqtiga qaar, waqtigaas, Denis 'aabbe wuxuu go'aansaday inuu noqdo tababaraha kubada cagta. Go'aanka aabihiis wuxuu faa'iido u lahaa shaqada Denis. Hoos waxaa ku qoran sawirka Dmitri oo ah maamulaha.
Ilaa hadda qoyska Denis Cheryshev waxay ka welwelsan yihiin, xilligoodii ugu dambeeyay ee sugitaanka ammaanta ayaa ugu dambeyntii dhammaatay. Sawirada Denis 'ee Ruushka 2018 World Cup ayaa dhab ahaantii u soo jeestay xirfaddiisa, noloshiisa gaarka ah iyo magaca qoyska.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Denis Cheryshev ee Sheekada Caruurnimada iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Taariikhda wax laga badalay: July 22, 2018